होसियार ! स्याउ खाँदा विचार नगरे जान सक्छ ज्यान | Tapaiko Khabar
होसियार ! स्याउ खाँदा विचार नगरे जान सक्छ ज्यान
तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : मंसिर १०, २०७५ शिक्षा-स्वास्थ्य
विश्वबजारमा नै सदाबहार उपलब्ध हुने फल स्याउ । प्रचलनमा नै रहेको कुरा , ‘दैनिक एउटा स्याउ खानुहोस्, डाक्टरकहाँ जानुपर्दैन ।’ अर्थात स्याउ स्वास्थ्यका लागि कति फाइदाजक छ भन्ने कुरा यसले दर्शाउँछ ।
जतिबेला जस्तो समयमा पनि खान सकिने सदावहार फलको रुपमा रहेको स्याउ बिहान खाली पेटमा होस् वा खाना खाइसकेपछि वा खानुअघि । कतिपय फलफूल चाहि निश्चित मात्रा र समयमा खानुपर्ने हुन्छ । स्याउको हकमा यस्तो बन्देज छैन ।
हामीले दैनिक जसो खाने गरेको फलको रुपमा रहेको स्याउमा रहेको बीज कति खतरनाक हुनसक्छ भने त्यसले मृत्युको मुखमा पनि पुर्‍याउन सक्छ । स्याउको बिजमा एक यस्तो तत्व पाइन्छ, जो एकदम विषालु हुन्छ । यो तत्व पाचन इन्जाइमको सम्पर्कमा आउँछ र त्यससँग मिलेर साइनाइड बन्छ ।
स्याउनको भित्र रहेको बिजमा रहेको यस तत्वले बिमार मात्र हुने होइन, ज्यान लिनसक्ने खतरा हुन्छ । हुन त अहिलेसम्म स्याउको दानाकै कारण मृत्यु भएको भन्ने खाबर सतहमा आएको छैन । यद्यपी यसलाई कम आँक्नु हुँदैन ।
स्याउले उत्पादन गर्ने यस तत्वले कसरी शरीरमा हानी गर्छ ?
यस भन्दा अगाडीनिर्मला पन्तको पक्षमा डा. केसी, प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिए यस्तो चेतावनी
यस पछिथप गृहकार्य नपुगेपछि नेकपाको बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित